” နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ” ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီး ကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေ - Update News
December 21, 2020 December 21, 2020 - by Best_admin
ကားပေါ်မှာ လူပျိူကြီးနဲ့ကောင်မလေး အတူတူဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးကို မမြင် မြင်အောင်ပြတယ်။ အဲဒီမှာ လူပျိူကြီးက အတင့်ရဲပြီး ” နင့်စကပ်ကို အပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ် ” ဆိုတော့ ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံကို တခါတည်းတောင်းပြီးစကပ်ကို အပေါ်တင်ပေးတယ်။
နောက် …ညု တုတုနဲ့ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက ….” ရှင် နောက်ထပ်တစ်သောင်းထပ်ပေးရင် ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့နေရာ ပြမယ် “” ဟာ ” …. လူပျိူကြီး တံတွေးသီးသွားပြီး ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းကိုလည်း လျှောလျှောလျူ လျူ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက ကားရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းကို လက်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်။
” တွေ့လား… ရန်ကုန်အမျူ ိးသမီး ဆေးရုံကြီး ” “ခွီးးးး သောက်ကျိုးနဲ ဂျင်းမိပြီဟ….” ဒါကြောင့် လူပျိုကြီးများ သတိထားပြီး မိန်းကလေးငယ်လေးတွေ တွေ့တိုင်းကြည့်ရှောင်ပါ စွတ်မဖွန်မိပါစေနဲ့ ခုခေတ်မိန်းကလေး အများစုဟာ ကျတော်တို့လို လူပျိုကြီးများကို အဓိကပစ်မှတ်ထားနေတာပါ လူပျိုကြီးများ ဘေးရန်ကင်းရှင်း ကြပါစေ….ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်ပါစေ
ကားေပၚမွာ လူပ်ိဴႀကီးနဲ႔ေကာင္မေလး အတူတူဆုံေတာ့ ေကာင္မေလးက သူ႔ေျခသလုံးဝင္းဝင္းေလးကို မျမင္ ျမင္ေအာင္ျပတယ္။ အဲဒီမွာ လူပ်ိဴႀကီးက အတင့္ရဲၿပီး ” နင့္စကပ္ကို အေပၚနည္းနည္းတင္ေပးရင္ ပိုက္ဆံ တစ္ေသာင္းေပးမယ္ ” ဆိုေတာ့ ေကာင္မေလးက ပိုက္ဆံကို တခါတည္းေတာင္းၿပီးစကပ္ကို အေပၚတင္ေပးတယ္။
ေနာက္ …ညဳ တုတုနဲ႔ၾကည့္ၿပီး ေကာင္မေလးက ….” ရွင္ ေနာက္ထပ္တစ္ေသာင္းထပ္ေပးရင္ ရွင့္ကို ကေလးေမြးတဲ့ေနရာ ျပမယ္ “” ဟာ ” …. လူပ်ိဴႀကီး တံေတြးသီးသြားၿပီး ပိုက္ဆံ တစ္ေသာင္းကိုလည္း ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴ လ်ဴ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ ေကာင္မေလးက ကားရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းကို လက္ညိဳးထိုးျပလိုက္တယ္။
” ေတြ႕လား… ရန္ကုန္အမ်ဴ ိးသမီး ေဆး႐ုံႀကီး ” “ခြီးးးး ေသာက္က်ိဳးနဲ ဂ်င္းမိၿပီဟ….” ဒါေၾကာင့္ လူပ်ိဳႀကီးမ်ား သတိထားၿပီး မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြ ေတြ႕တိုင္းၾကည့္ေရွာင္ပါ စြတ္မဖြန္မိပါေစနဲ႔ ခုေခတ္မိန္းကေလး အမ်ားစုဟာ က်ေတာ္တို႔လို လူပ်ိဳႀကီးမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားေနတာပါ လူပ်ိဳႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းရွင္း ၾကပါေစ….ရယ္ေမာျခင္းျဖင့္ ဘဝအေမာေတြ ေျပေပ်ာက္ပါေစ
Previous Article အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်
Next Article မိဘတွေအပေါ်သိတတ်လိမ္မာလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမြင့်မြတ်ရဲ့အကြောင်းစုံကိုဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး
အတွင်းသားတွေ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယို
ယောင်္ကျာကို ငယ်ရည်းစားနဲ့ ခပ်တည်တည် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ မေခလာ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲနေတဲ့တိုက်ခန်းရှေ့မှာ မြင်မကောင်းလောက်အောင် နှာဘူးထနေတဲ့ အမျိုးသား (ရုပ်သံ)
စစ်ကိုင်းမှာ ဆွမ်းကျန်အလှူခံ များပြားသောကြောင့် လူစုခွဲကာ အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံဝေပေးခဲ့ရဟုဆို